Sida loo buuxiyo codsiyada warqad shaqo| USAHello | USAHello
Marka aad codsanayso shaqooyinka, aad u baahan tahay inaad buuxiso codsiyada warqad. Waxaad u baahan doontaa inaad qor macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo xirfadaha shaqo. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin kaa caawin doontaa in aad buuxiso codsiga shaqada warqad.
codsiyada Paper jira noocyo aad isticmaasho si aad u codsatid shaqo. Waxay ku waydiin ku saabsan waxbarashada, xirfadaha iyo taariikhda shaqo. Waxaa muhiim ah in si sax ah buuxinta codsiyada warqad. Tani waxay noqon kartaa adag sababtoo ah ma aad marna masixi karin jawaabahaaga. Isku day in aadan si ay u sameeyaan qaladaad kasta, oo had iyo jeer runta sheeg! Halkan waxaa ku qoran nasteexo dhigi doonaa fududahay in la buuxiyo codsiyada warqad.
1. Layliska codsiga shaqada muunad
Download this codsiga shaqada muunad iyo buuxinta foomka. Marka aad riix link, dukumintiga furi doonaa. Isticmaal arrow waxay hoos ugu soo dejisan.
Marka aad leedahay waxay ka buuxisay baxay, aad isticmaasho tusaale ahaan marka aad diyaar u ah inay buuxiyaan codsi dhabta ah waa. waxaa ku hay in nuqulka macluumaadka aad u baahan, sida taariikhaha aad shaqeeyay shirkad. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo akhrisan kartaa aad u hesho macluumaad diyaar u shaqo raadinta a.
2. Had iyo jeer ka heli laba nuqul ka mid ah codsiga warqada
Haddii aad buuxinta codsiyada warqad, xaqiiji inaad hesho ugu yaraan labo koobi codsiga. Marka aad tagto shirkadda soo qaado codsiga shaqada, weydiiso labo nuqul. habkan, haddii aad qalad samayso, waxaad bilaabi kartaa in ka badan. Isticmaal qalin marka aad ku dhaqmaan laakiin qalin buluug ama madow, waayo, mid aad u qaadan in aad u shaqayso. Waxaad sidoo kale u tagi kartaa maktabadda iyo nuqul ka hor inta aanad bilaabin qoraalka codsiga.
3. Si taxaddar leh u akhri tilmaamaha ku qoran codsiyada warqad
Akhri fariimaha oo dhan ka hor inta aanad bilaabin. waqtiga si aad u qorto jawaabaha on gabal warqad gooni ah qaado si loo hubiyo in ay sax yihiin ka hor inta iyaga oo gashanno hubka codsiga shaqada warqada.
4. Isticmaal qalin iyo aad u cad u qor
Haddii loo-shaqeeyahaagu ma akhrisan kartaa magacaaga ama lambarka taleefanka, waxay idiin ma yeedhi doonaa waraysi. Isku day inaad qoraal ahaan isticmaalaya waraaqaha caasimadda si aad jawaabaha aad si fudud u akhriyo. Hubi inaad buuxiso Dhammaan qaybaha oo ah.
5. Wargeli tixraacyada yihiin si ay u diyaarisay
Haddii aad u baahan tahay inaad Liiska ku tixraacyada in codsiyada warqad, u sheeg inaad iyaga qoraya sida tixraacyada. Tixraacyada yihiin dadka ka soo shaqeeyay kula hor. U sheeg shaqada aad codsanaysid iyo waxa xirfadaha loo baahan yahay shaqada. habkan, haddii ay helaan call a ama email ah in ay dabagal ku codsigaaga, waxay la diyaarin doonaa in aan ka jawaabo su'aalo adiga kugu saabsan. haddii aad maqasho in qof ayaa u yeedhay oo adiga kugu saabsan, iyaga ku mahadsan tahay in aad gacan ka dib markii.
6. Samee iyo sii nuqul ka mid ah codsiyada warqad
Marka aad codsanayso shaqo leh codsiyada warqad, callays sii nuqullo. Waxaad si caadi ah samayn kartaa nuqulo ku saabsan 10 cents maktabadda degaankaaga. Caawino weydiiso haddii aan ku aqoon sida loo isticmaalo mashiinka naqilkii. Qor magaca shirkadda, waxa shaqo aad codsatay iyo marka aad codsatay. Haddii aad u bixiyey waraysi, akhriyin wixii aad hoos ku qoray codsiga ka hor waraysigaaga.
7. Labis xunna marka aad codsigaaga in shirkadda keeno
Codsashada shaqooyinka la codsiyada warqad u baahan tahay in aad boosta ama iyaga keeni doonaan cidda aad u shaqayso. Labis xunna marka aad arjiga soo celin shirkadda. waayo, raggii, xirto maaliyada dheer gacmo, surwaalka dharka, iyo kabaha dharka. Waayo, haweenka, xirtaan dharka a nice, darafkii la tosho shuqul, ama isku joog kabo dharka. Marka kaxaynayo, ahaadaa qof asluub ​​fiican in qof kasta oo aad la kulanto. Xusuusnow, dhaqanka American, waxaa wanaagsan in aad iftiimisid. Dhoola caddee markaad timaado, oo weydii haddii tababaraha waa la heli karaa. Haddii tababaraha waa la heli karaa, u sheeg inaad soo daadanaya off codsiga shaqada aad iyo aad aad u xiiseynaya shaqada. Dhoola caddee oo u sheeg iyaga mahadsanid.
8. Hubi in aad ka jawaabto aad telefoon iyo email hubiyo
Loo shaqeeyeha wuxuu eegi doonaa codsiyada oo dhan, ka dibna dooro dadka qaar waraysi. U hubso in aad ka jawaabto aad telefoon xataa marka aanad garan tirada la wacaya. Dhegayso voicemails aad sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodo oo si deg deg ah dib ugu soo wac. Hubi in aad email inta badan si aadan u suuragelin in aad casuumaad waraysi. Haddii loo shaqeeyaha uu xiiseynayo inuu wareysi, samayn aad ugu fiican inay u yimaadaan in waqti ay aad codsato in aad. Waxaa fiican in aan ka dhigi doonaa dib-u-jadwalka. Waxa kaliya ee aad waa haddii ay jirto xaalad degdeg ah.
9. Raac ka dib codsanaya shaqooyin
Haddii aadan maqli waayaan dib laba todobaad ee arjiga warqadda ku jira, ay caadi tahay in wac ama email u shaqayso waa in aad weydiiso oo ku saabsan xaaladda codsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, waa caadi haddii aadan dib u maqlaan, sidaa darteed ha is dhiibin. Loo-shaqeeyayaasha heli badan oo codsiyada shaqada booska kasta waa la heli karaa. Iyagu ma ay haysan waqti ay qof kasta ugu yeedhaan. Continue codsanaya shaqooyin kale oo codsiyada warqad xataa haddii aad ma awoodaan si aad u hesho updates. Mid ka mid ah ugu danbeyn waxaad la xiriiri doonaa waraysi.
Daawo video ah oo ku saabsan sida loo buuxiyo codsiga shaqada
Hel liiska tixraacyada xirfadeed diyaar